Eye Fatigue (မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း) - Hello Sayarwon
Eye Fatigue (မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Eye Fatigue (မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း)
Eye Fatigue (မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း) ကဘာလဲ။
ပြဿနာနာ နှင့် ရှာဖွေမှု
မျက်စိညောင်းတယ်၊ကိုက်တယ်ဆိုတာ သင့်မျက်စိကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ (ဥပမာ အကြာကြီးစာဖတ်တာ၊ခရီးဝေးကားမောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ဖုံး၊ကွန်ပြူတာ အစရှိတာတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုတာ) မျက်စိပင်ပန်းသွားတာ၊ညောင်းသွားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ မျက်စိကို အနားပေးလိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ မျက်စိကို သက်တောင့်သက်သာ ရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ မျက်စိညောင်းတာ ပျောက်သွားလေ့ရှိတာမို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်အရာတွေက မျက်စိကို ညောင်းညာကိုက်ခဲစေနိုင်သလဲ။
ကားအကြာကြီးမောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် အကြာကြီး စာဖတ်တာလိုမျိုး မျက်စိကို အင်မတန်အလုပ်လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးဟာ မျက်စိညောင်းစေ၊ကိုက်စေပါတယ်။ အောက်ပါအရာတွေကို အကြာကြီးပြုလုပ်ရင် မျက်စိညောင်းစေပါတယ်။
အလင်းစူးစူးကို အကြာကြီးကြည့်တာ ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်အားနည်းတဲ့ နေရာမှာ စာဖတ်ဖို့၊တခုခုကို မြင်ရဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားရင်လည်း မျက်စိညောင်းစေပါတယ်။ မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲစေတဲ့ အဓိကအပြုအမူတွေထဲမှာ ကွန်ပြူတာ၊စမတ်ဖုန်း စတာတွေကို အကြာကြီးသုံးတာ ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းတွေအလွန်အကျွံဆော့တာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မျက်စိအာရုံစိုက်လွန်းသူတွေ၊မျက်စိအသုံးပြုမှုများသူတွေမှာ မျက်စိညောင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Eye Fatigue (မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
နေရထိုင်ရ မသက်မသာဖြစ်စေ၊စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့ လက္ခဏာတွေ ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
တခုခုကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်ဖို့ခက်ခြင်း
မျက်လုံးခြောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် မျက်ရည်ပူတွေ ထွက်ခြင်း
လည်ပင်း၊ပုခုံး ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျော နာခြင်း
မိမိဖာသာ ကုသလို့ မသက်သာဖူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
မျက်စိညောင်းတာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက ဘာလဲ။
မျက်စိညောင်းတာဟာ အန္တရာယ်မရှိသလို ကာလရှည်ခံစားရမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေလည်း မရှိတတ်ပါဖူး။ ဒါပေမယ့် နေမထိထိုင်မသာတော့ ဖြစ်စေပါမယ်။ မျက်စိညောင်းတာဟာ သင့်ကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေမယ့်အပြင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း လျော့ကျစေပါမယ်။
မျက်စိညောင်းတာကို ဘယ်လိုစမ်းသပ် ဖော်ထုတ်မလဲ။
သင်ခံစားနေရတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် အကြောင်းရင်းတွေအကြောင်း သင့်ဆရာဝန်က မေးခွန်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့ အမြင်အာရုံကို စမ်းသပ်တာအပါအဝင် တခြားလိုအပ်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်စိညောင်းတာကို ကုသဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအလေ့အထတွေကို ဒါမှမဟုတ် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြောင်းအလဲလေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ တခြားမျက်စိပြဿနာတွေရှိရင်လည်း ကုသပေးဖို့ လိုပါမယ်။ တချို့လူတွေမှာ စာဖတ်တဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပြူတာအသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေမှာ မျက်မှန်တပ်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ မျက်စိကို ဒါဏ်မပိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ အကွာအဝေးတွေဆီ အာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးဖို့လည်း သင့်ဆရာဝန်က အကြံပြုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်လုပ်ကိုင်မှု အလေ့အထလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားလေးတွေမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မျက်စိညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင် ဒါမှမဟုတ် လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းကို ချိန်ညှိပါ ။ စာအုပ်ဖတ်တာ၊တီဗီကြည့်တာ အစရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ အလင်းရောင်ကို သင့်မျက်လုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ညှိထားသင့်ပါတယ်။
မျက်စိကို ပုံမှန် အနားပေးပါ ။ ၂၀-၂၀-၂၀ ဥပဒေသကို ကျင့်သုံးပါ။ အဓိပ္ပါယ်က မိနစ်၂၀ကြာတိုင်းမှာ ပေ၂၀အကွာကို စက္ကန့်၂၀လောက် ကြည့်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နေဟန်ထား မှန်ကန်ပါစေ ။ အနေအထား ချိန်ညှိလို့ရတဲ့ ထိုင်ခုံကို အသုံးပြုပါ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပြူတာနဲ့ သင့်အကွာအဝေးကို မှန်ကန်သင့်တော်အောင် ချိန်ဆပါ။
ကွန်ပျူတာရဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ချိန်ညှိပါ ။ သင့်ကွန်ပျူတာ ရုပ်ထွက်ကောင်းပါစေ၊ ကြည်လင်ပါစေ။ ဒါမှသာ သင့်မျက်စိ အရမ်းကြီး အာရုံမစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင်ကို ရှင်းလင်းနေပါစေ။ ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က ဖုန်တွေကို မှန်မှန်သုတ်ပေးပါ။ ဖုန်တွေက ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ကျစေပြီး သင့်ကို အာရုံပိုစိုက်ရစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အားဆေးတွေ သောက်ပါ ။ သင့်တော်မျှတတဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်အားဆေးတွေကို သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့်မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အင်မတန် အကျိုးရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ (ဥပမာ ဗီတာမင် အေ၊စီ၊အီး နဲ့ ဗီတာမင်ဘီတွေ၊ဇင့်ဓါတ်တွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အားဆေးတွေ)ဟာ သင့်မျက်စိ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးထူးစေပြီး မျက်စိဒါဏ်ဖြစ်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ကို ရွေးချယ်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Eye Fatigue. http://www.webmd.com/eye-health/eye-fatigue-causes-symptoms-treatment. Accessed September4th , 2016.
Eyestrain. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eyestrain/basics/definition/con-20032649. Accessed September4th , 2016.
Eye Strain. http://www.medicinenet.com/eye_strain/article.htm. Accessed September4 th , 2016.
11 Tips for Eliminating Computer Eye Strain. http://visionsource.com/blog/tips-for-eliminating-computer-eye-strain/. Accessed September4th , 2016.